Momba anay - Cepai Group Co., Ltd.
- Orinasa orinasanay -
Ny foibe HQ sy R&D an'ny vondrona CEPAI dia miorina eo afovoan-tanin'i Sina - Shanghai ary ny orinasanay dia miorina ao amin'ny faritra fampandrosoana ara-toekarena any Shanghai Songjiang sy ny faritra fampandrosoana ara-toekarena Jinhu, ao amin'ny faritry ny toekarena ao amin'ny Yangtze River Delta.
Ny orinasa dia mandrakotra velarantany 48000 metatra toradroa, ary 39000 metatra toradroa ho an'ny atrikasa. Nandritra ny folo taona mahery ny fivoarana haingana, ny vondrona CEPAI dia nanangana sampana dimy, ao anatin'izany ny Shanghai CEPAI Investment Management Co., Ltd. KIST Valve Co., Ltd. CEPAI Group Valve Co., Ltd. CEPAI Group Pressure instrument Co., Ltd. CEPAI Group Instrument Co., Ltd. ary CEPAI Group Great Hotel Co., Ltd. Araka ny fandrindrana ny tsenantsika, CEPAI Group dia natokana hananganana ny varotra rafitra serivisy sy varotra an-tserasera avy any an-trano sy any ivelany miankina amin'ny tsenanay. Mihazona ny "fananganana ny multinational miaraka amin'ny teknolojia mitarika sy ny serivisy kilasy voalohany" ho tanjonay tolona, ​​ny vondrona misy anay dia nanolo-tena hanangana mpanamboatra tena tsara manana hery mitaona lehibe amin'ny fitaovana fanaraha-maso, valves, ary sehatry ny milina solika manao ny marika 'CEPAI' manerantany fifaninanana.
Ny toerana mialoha ho an'ny fampiofanana momba ny mpiasa sy ny teknolojia R&D ary koa ny paikadim-pampandrosoana dia ny asa fitoriana ny asan'ny mpisava lalana lehibe noforonin'ny mpitarika ny CEPAI nandritra ny am-polony taona maro, ary ny paikadim-pampandrosoana "orinasa mpampiroborobo ny teknolojia dia voamarina tamin'ny fiandohan'ny orinasa. Manoloana ireo mpifaninana matanjaka sy tsena henjana dia mihaorina ny orinasanay ary nanangana ivon-toerana fandrindrana ara-barotra sy rafi-pampianarana R&D any Shanghai tamin'ny taona 90. Amin'izao fotoana izao, ny vondrona CEPAI dia nifehy teknolojia manan-danja maro sy ampahany sasany amin'ny teknolojia fototra ho an'ny firenena sy ny Shanghai, ary namorona ireo vokatra tsy manam-paharoa R&D tombony. CEPAI dia manana fitaovana maoderina feno, toy ny foibe fanodinana, milina fanaraha-maso, fitaovana milina cnc, fiparitahan'ny plasma, efitrano fandinihana ara-batana sy simika, tsipika famokarana varnish, fanangonana valizy ary fametrahana tsipika famokarana, fanangonana fitaovana ary fametrahana tsipika famokarana, atrikasa fitsaboana hafanana , fitaovana fanadiovan-tena, tsipika famokarana mpampita faneriterena / tsindry hafa sns. Mandritra izany fotoana izany, ny vondrona CEPAI dia nanokana hatrany ny herin'ny asa, loharanon-karena ara-batana sy ara-bola amin'ny famoronana sy fanatsarana ny fananana sy ny kalitaon'ny vokatra. CEPAI vondrona dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa amin'ny Chongqing University, Shanghai Automation Instrumentation Institute, Shanghai Jiao Tong University, Nanjing University any atsimo atsinanana, institiota automatique Shenyang, institiota fampitaovana milina solika ao Shan Dong sns. Ary ny vokatra voamarika CEPAI valizy sy fitaovana CEPAI dia nampiharina betsaka tao amin'ny indostria isan-karazany, toy ny solika, simika, indostria fitrandrahana, vy, fanafody, sakafo, lamba, indostrian'ny ady, tsy mazava, fanamboarana sambo, fiaramanidina sns, ary nahazo laza tsara teo amin'ny mpanjifanay.
CEPAI dia manam-pahaizana manokana amin'ny serivisy R&D, fanamboarana, varotra ary fifanarahana EPC amin'ny fitaovam-pandrefesana solika avo lenta sy etona fandrehitra, rafitra kenda sy famonoana, valves vavahady vavahady, valves baolina misy savaivony lehibe, valve valves, valves fotaka, valves plug, fotaka -gas Separator sns. Ny vokatra rehetra dia tanteraky ny mahazatra API-6A, API-6D, API-16C.CEPAI dia afaka manome fonosana vahaolana fampandrosoana ao anatin'ny fotoana fohy indrindra. Mpanjifa maro no manomboka ny fiaraha-miasa amin'ny CEPAI avy amin'ny fikirakirana fanadihadiana momba ny fampandrosoana, talanjona amin'ny CEPAI mamaly haingana, manam-pahaizana manokana ary serivisy mafana, fantatr'izy ireo fa i CEPAI no mpiara-miasa tadiavin'izy ireo, avy eo manomboka ny fiaraha-miasa maharitra. CEPAI dia liana amin'ny filanao ary vonona ny hanome vahaolana hijanonana iray izay mihoatra ny andrasanao
Ny CEPAI dia miara-miasa amin'ireo mpitrandraka fandavahana, mpamokatra solika sy gazy, mpandraharaha fantsom-pitrandrahana, refinera ary tompona dingana hafa hifehezana ny fizotrany mivantana, handrefesana ary hanerena ny fanerena ary ny fikorianany. Mba hanarahana akaiky ny fenitry ny API (American Petroleum Institute) CEPAI Group dia nanambola vola maherin'ny 50 tapitrisa USD hananganana iray amin'ireo tobim-pamokarana izay manamboatra manokana API 6A, API 6D, fitaovana API 16C, kojakoja mifandraika aminy.
Miaraka amin'ny fampidirana toekarena manerantany amin'izao fotoana izao, ny olona CEPAI dia sahirana mamorona marika "CEPAI" iraisam-pirenena. Ny CEPAI ho avy --- dia natokana ho an'ny indostrialy, valizy ary indostrian'ny milina solika mandrakizay. Ankoatr'izay, CEPAI Group dia natokana hananganana ny marika miaraka amin'ny fitaomana iraisam-pirenena ary hanao fanomezana ho an'ny fiarahamonina amin'ny tanjona hananganana orinasa transnational teknolojia mitarika.
- Jereo Izahay amin'ny hetsika! -
Ny orinasa dia mpitarika nasionaly iv, ivon-toeram-pamokarana malefaka miaraka amina mpiasa miasa mahafeno fepetra ambony.
Ny vondrona CEPAI dia nahazo atrikasa fanodinana milina 35000 metatra toradroa. Mba hahatratrarana ny fepetra famokarana valva misy ON sy avo lenta dia misy lathes mitsangana ao amin'ny 3.5 sy 2 metatra, lathes marindrano ao amin'ny 1,8, 1 .25 metatra Inona koa, hanatsarana ny fikarakarana marina sy ny mifanentana amin'ny faritra, misy fitaovana milina CNC manokana, ary faritra afovoany fanodinana ao amin'ny atrikasa milina, izay ampiasaina hanatanterahana ny famokarana akaiky ny valva misy fampiasana manan-danja sy firafitra sarotra na ho an'ireo mpanjifa manana fitakiana manokana.
Teknika fanodinana mahafinaritra, rafitra fiantohana kalitao tonga lafatra, antoka CEPAI Supply mendrika tsara indrindra amin'ny faritra rehetra. CEPAI dia nanana fitaovana maoderina feno, toy ny foibe fanodinana, ny masinina manara-maso. Masinina CNC. fiparitahan'ny plasma efitrano fandinihana ara-batana sy simika, tsipika famokarana varnish, fanangonana valva ary fametrahana tsipika famokarana, fanangonana fitaovana ary fametrahana tsipika famokarana, atrikasa fitsaboana hafanana, fitaovana fanadiovan-tena. fanamafisam-peo / fahasamihafana fanodinana fitaovana famokarana mari-pana, fantsom-pitaovana ary tsipika famokarana zavamaniry haavo Mandritra izany fotoana izany, ny vondrona CEPAI dia nanokana hatrany ny herin'ny asa, loharanon-karena ara-batana sy ara-bola amin'ny famoronana sy fanatsarana ny fananana sy ny kalitaon'ny vokatra.
Fitaovana fanodinana mandroso mba hiantohana CEPAI mahery kokoa amin'ny fifaninanana tsena valva. CEPAI dia nitarika ny fampahafantarana ireo fitaovana famokarana mandroso iraisampirenena, toy ny ivon-toeram-pivarotana milina fanavaozana ny fanavaozana sy fanavaozana ireo fitaovana fampitaovana ao amin'ilay orinasa iray, izay miantoka ny haavo iraisam-pirenena momba ny vokatra vokarinay.
Ny fahafaha-manao fikarohana sy fampandrosoana dia manohana ny orinasa hahatratra hatrany ny tanjona avo indrindra mandrakizay.
CEPAI dia manana ekipa fikarohana sy fampandrosoana miaraka amina fampianarana ambony, fahaizana ambony ary fahaizana ambony. Ivontoerana fikarohana sy fampandrosoana ho an'ny valizy any amin'ny faritany izay ahitana mpikaroka zokiolona indrindra dia mihatra amin'ny fikarohana sy famolavolana valizy sy vokatra teknika avo lenta izay manana zon'ny fananana ara-tsaina manokana. Mandritra izany fotoana izany CEPAI dia miara-miasa amin'ny oniversite malaza maro toy ny Shanghai Automation Instrumentation Institute. Shanghai Fudan University, Shanghai Jiao Tong University, Nanjing University. Jiangsu University, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) ary toy izany hatrany amin'ny famolavolana vokatra mandroso indrindra mifototra amin'ny fampidirana fanekena mandroso sy fampidirana ireo haitao mandroso.
Ho fahombiazana mifototra amin'ny fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojia, mametraka fototra ho an'ny fampandrosoana ho avy ny orinasa. Ny CEPAI dia tsy mitsitsy ezaka mba hahatongavana amin'ny teboka avo indrindra amin'ny foto-kevitra momba ny fanavaozana ara-teknika, ny teknolojia cored, ny talenta fikarohana ary ny fitaovana.
Ny orinasa dia mpitarika nasionaly amin'ny ivon-toeram-pamokarana malefaka miaraka amina mpiasa miasa mahafeno fepetra ambony.
Ny vondrona CEPAI dia nanana atrikasa fanodinana milina 25000 metatra toradroa .Raha mahafeno ny fepetra takiana amin'ny valizy mamokatra amin'ny ON sy ambaratonga avo dia misy lathes mitsangana ao amin'ny 3.5 sy 2 metatra, lathes marindrano ao amin'ny 1,8, 1 .25 metatra Inona koa, hanatsarana ny fikarakarana marina sy ny mifanentana amin'ny faritra, misy fitaovana milina CNC manokana, ary faritra afovoany fanodinana ao amin'ny atrikasa milina, izay ampiasaina hanatanterahana ny famokarana akaiky ny valva misy fampiasana manan-danja sy firafitra sarotra na ho an'ireo mpanjifa manana fitakiana manokana.
Fanaraha-maso henjana ampiharina amin'ny alàlan'ny fisafidianana fitaovana, fanodinana Casting, fivoriambe ary fanesorana ny faritra misy ny Apare sy ny kojakoja fanampiny.
Ny orinasa dia manana foibe fanaraha-maso maoderina sy fanandramana maoderina amin'ny fitsaboana hafanana, famakafakana simika, famakafakana spectral, famakafakana metalylographic, famakafakana fampisehoana mekanika, fitsapana tara-pahazavana, fitsapana ultrasonic, fanandramana potika andriamby, fitsapana antonony sy tsindry lehibe ho an'ny valves sns.
Miorina amin'ny fiheverana ny kalitao dia ny ain'ny orinasa ary ny lazany no fototry ny orinasa, ny orinasanay dia mametraka rafitra antoky ny kalitao mba hifehezana ny kalitao ho an'ny vokatra.CEPAI dia manana fomba fifehezana kalitao feno ao aminy ihany. Avy amin'ny fidirana amin'ny akora sy ny fizarana outsourcing, ny fametahana ny mason-tsivana amin'ny fifehezana kalitao mivoaka amin'ny famokarana vita, ny rafitra fitantanana tambajotra solosaina dia ampiharina ary apetraka ny rakitra kalitaon'ny vokatra mba hahatsapany ny fitantanana ny fanarahan-dia ny vokatra. amin'ny fanizingizinana ny politika momba ny kalitaon'ny mpanjifa mifantoka amin'ny fahatsapana ny tarainan'ny mpanjifa, mifototra amin'ny rafitra hikarohana ny vokatra zero, manosika tetik'asa mahafa-po ny mpanjifa izahay mba hanomezana fahafaham-po ny fangatahana sy antenain'ny mpanjifa.